घर जग्गा कानून अनुसार दुबई मा एक सम्पत्ति खरीद - कानून फर्म दुबई
घर जग्गा कानून अनुसार दुबई मा एक सम्पत्ति खरीद
एक सम्पत्ति किन्न
Expats किन्न सक्छन्
दुबईमा सम्पत्ति खरीद गर्न सँधै सरल र सुव्यवस्थित थिएन जुन अहिले छ। तर अहिले अवस्था अझ राम्रा छ। दुबईमा सम्पत्ति किन्नका लागि चार आधारभूत कानूनी कदमहरू छन्, र हामी सबैलाई यस लेखमा हेर्नेछौं।
तपाईं आफ्नो अर्को घर / घर जग्गा लगानी तयार-प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्पत्ती खरीद सहज र छिटो
क्रेता RERA संग दर्ता हुनुपर्दछ।
यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि एक विदेशीको रूपमा, तपाईंलाई दुबैको तथाकथित निर्दिष्ट क्षेत्रमा मात्र घर जग्गा खरीद गर्न अनुमति छ। यी समुदायहरूलाई दुबईका क्राउन राजकुमारले गैर-युएई र गैर-जीसीसी नागरिकहरूलाई इमिरेटमा घरको अवसर पाउने मौका दिइरहेका छन्।
अब हामीले त्यसलाई हटाइसक्यौं, अब कसरी तपाईंको अर्को घर / घर जग्गा सम्पत्ति लगानी-तयार गर्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाऔं। वास्तवमा, जब यो दुबईमा एक सम्पत्ति खरीदको कुरा आउँछ भने, घर जग्गा कानून अनुसार निम्न कानुनी चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्नेछ।
१. एक क्रेता र विक्रेता सम्झौता स्थापना गर्दै
एकचोटि तपाईंले आफ्नो खोजी पूरा गर्नुभयो भने, सहि सम्पत्ती फेला पार्नुभयो, डेभलपरको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुभयो, दुबईको क्षेत्र, आरओआई के हो, र अधिक, तपाईं पहिलो चरणसँगै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जुन बिक्रीको अनलाइन शर्तहरू सम्झौता गर्नु हो। विक्रेता संग। तपाईं इस्टेट एजेन्ट वा कानूनी सल्लाहकारको मद्दत बिना यो चरण गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी एक प्रतिष्ठित दुबई रियल एस्टेट एजेन्सी वा कानूनी स्थिरता फर्महरू द्वारा सम्पत्ति लिनुपर्दछ जुन रियल ईस्टेट कानून अनुसार यो गर्दछ।
२. घर जग्गा कानूनको आधारमा बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै
त्यस पछि, अर्को कुरा बिक्रीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु हो यसलाई सम्झौता ज्ञापन पत्र (MOU) पनि भनिन्छ। दुबईमा यो कागजात अनुबंध एफ को हकदार छ र दुबई ल्याण्ड डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा उपलब्ध छ। दुबई मा मानक एक 10% जग्गा एकैचोटि विक्रेताको लागि भुक्तान गर्न को लागी सम्पत्ती मा छ। एक पटक यो चरण पूरा भएपछि, तपाईं प्रक्रिया मार्फत आधा बाटोमा हुनुहुन्छ।
A. कुनै आपत्ति प्रमाणपत्र (NOC) को लागी आवेदन
अर्को, तपाइँ विक्रेताको कार्यालयमा विक्रेतासँग भेट्नुहुनेछ। यस बैठकको कारण स्वामित्व हस्तान्तरणको लागि कुनै आपत्ति प्रमाणपत्र (NOC) को लागी आवेदन र भुक्तान गर्नु हो। एनओसी विकासकर्ता द्वारा जारी गरिनेछ, तर सेवा शुल्कको माध्यमबाट सम्पत्तीमा कुनै उत्कृष्ट शुल्कहरू छैन भनेर प्रमाणित गरेपछि।
Dubai. दुबई जग्गा विभागको साथ स्वामित्व हस्तान्तरणलाई प्रभाव पार्दै
एक पटक एनओसी प्राप्त भएपछि, त्यसपछि तपाईं दुबई ल्यान्ड डिपार्टमेन्ट अफिसको बिक्रेतालाई भेट्नुहुनेछ ट्रान्सफर पूरा गर्नका लागि। DLD ले तपाईंलाई म्यानेजरको चेकको रूपमा सम्पत्ति भुक्तानी गर्न भन्नेछ। यस चेकलाई हस्तान्तरण मितिमा विक्रेतालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। अन्तमा, तपाइँको नाममा एक ब्राण्ड-नयाँ शीर्षक डीड जारी हुनेछ, र तपाइँ आधिकारिक रूपमा दुबईमा सम्पत्तीको मालिक बन्नुहुनेछ।
दुबईमा घर किन्नको विभिन्न तरिकाहरू
यदि तपाईं नगदमा सम्पत्तीको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले धितोको लागि आवेदन दिन आवश्यक छ।
एक एक्स्प्याटको रूपमा सम्पत्ति खरीद गर्दा जटिल लाग्न सक्छ, विभिन्न अवरोधहरूको साथ जुन सानो-समयका खेलाडीहरू लpp्गडाउन सक्षम हुन्छ। तर प्रभारी अन्य व्यवस्थापकीय निकायहरूसँग दुबई भूमि विभागले सम्पत्ति खरीदको प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउँछ।
के म एक अफ योजना योजना खरीद गर्नु पर्छ?
यद्यपि अन्य विधिहरूको तुलनामा, यसले समय लिन्छ। दुबईमा सम्पत्ति किन्न यो वास्तवमै सब भन्दा सजिलो तरीका हो।
खरीदकर्ताले विकासकर्तालाई एक आवेदन फारम बुझाउनु पर्छ।
अनुप्रयोगको स्वीकृतिमा, खरिदकर्ताले पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा विकासकर्ताको बिक्री केन्द्रमा जान्छ र एकाई छनौट गर्दछ र प्रारम्भिक निक्षेप भुक्तान गर्न।
यसको समाप्ति स्तरमा निर्भरता, खरीददार सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि २ देखि years वर्ष कुर्ने हुन सक्छ। विकासकर्ताले पूरा हुने मिति आपूर्ति गर्नेछ।
किन तपाईले दोस्रो बजारमा एक सम्पत्ति किन्नु पर्छ?
यो बाटो दुबईमा सम्पत्ति प्राप्त गर्न सब भन्दा छिटो तरीका हो, तर यो प्रक्रिया अलि जटिल छ, जसमा उचित खर्च आर्थिक खर्चको हुन्छ।
एक लगानीकर्ता जसले सम्पत्ति किन्न चाहन्छ जहाँ विक्रेताको धितो छ जग्गा विभागबाट शीर्षक डीड स collected्कलन गर्नु अघि विक्रेताको धितो डिस्चार्ज गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ।
खरीददार RERA संग दर्ता हुनुपर्दछ।
एक पटक सम्पत्ती हेरिसकेपछि, क्रेताले विक्रेताको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ, र एक पटक यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि, विक्रेता एजेन्टले सम्झौता ज्ञापन (ठेक्का) उत्पादन गर्दछ, जसले सबै पार्टीहरूको लागत र जिम्मेवारीलाई जनाउँदछ।
त्यसपछि खरिदकर्ताले सम्पत्ति सुरक्षित गर्नको लागि विक्रेताको नाममा १० प्रतिशत जम्मा गर्नेछन्।
क्रेताले नगद भुक्तानी गरिरहेको छ वा धितो द्वारा मार्फत, अर्को चरणमा खरीदकर्ताको बैंक सम्पत्ति निरीक्षण गर्न र यो पर्याप्त सुरक्षित छ भनेर सुनिश्चित गर्न मूल्या ensure्कन प्रक्रिया पूरा गर्दछ।
एकचोटि अन्तिम अनुमोदन भयो र खरिदकर्ताले यसलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस पछि विक्रेताले विकासकर्ताबाट अस्वीकृति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त गर्न आवेदन दिनेछ।
त्यसपछि स्थानान्तरण पूरा गर्न भूमि विभागमा अपोइन्टमेन्ट बुक गरिन्छ।
दर्ता भएका सबै प्रक्रियाहरूका साथ, क्रेताले दुबई ल्याण्ड डिपार्टमेन्टलाई २% र AED2 भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, साथै विक्रेताको लागि खरीद मूल्य र एजेन्टलाई कमिसन दिनुपर्नेछ।
त्यस पछि खरीददारले शीर्षक डीड प्राप्त गर्नेछ, जुन उसको नाममा हुनेछ, नयाँ कुञ्जीमा कुञ्जीहरू र पहुँच कार्डहरूको साथ।
म धितो पुर्व अनुमोदन कसरी सुरक्षित गर्न सक्छु?
यदि तपाईं सम्पत्तीको लागि नगद तिर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले धितोको लागि आवेदन दिन आवश्यक छ। धितो अनुमोदन सुरक्षित गर्नका लागि तपाईले तयार गर्नु पर्ने साधारण कागजातहरू यहाँ छन्।
तपाइँको नियोक्ता बाट एक वेतन पत्र
तपाईले पाउनुभएको तलब पर्ची
पछिल्ला छ महिना देखि बैंक स्टेटमेन्ट।
फोटो र भिसा पृष्ठको साथ पासपोर्ट प्रतिलिपि।
एमिरेट्स आईडीको प्रतिलिपि।
क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्टको प्रतिलिपि।
धितो राखी forण लिनका लागि approval दिन लाग्छ र स्व-रोजगार भएका व्यक्तिको लागि लामो समय लाग्छ।
सम्पत्ती बिभिन्न किसिमका मूल्यहरू के हुन्?
सूची मूल्य: सम्पत्तीको सोध्नु मूल्य सूची मूल्य हो जुन कुराकानी योग्य छ।
बेच्ने मुल्य: बिक्री मूल्य मालिक मा बसोबास मूल्य हो।
मूल्याra्कन गरिएको मान: रियल एस्टेट एजेन्टले प्रदान गर्ने मान बजारमा अन्य सम्पत्तीहरूको सम्पत्तीको मूल्य तुलना गरेर।
अरू कुन लागतहरू विचार गर्नुपर्छ?
जब यो बिक्री को लागी आउँछ:
धितो क्लियरेन्स (रद्दको लागि शुल्क)
सेवा शुल्क / मर्मत शुल्क शुल्क को क्लियरन्स
ड्वावा / जिल्ला कूलि ofको बस्ती
विकासकर्ताको NOC आवश्यक छ भने
भूमि विभागलाई भुक्तानी स्थानान्तरण शुल्क
जब यो खरिद गर्न आउँछ:
खरीददार र विक्रेता बीच बिक्री सम्झौता अनुसार जम्मा
बिजुली र पानी अधिकारीहरु को लागी जडान
धितो आवेदन शुल्क यदि आवश्यक छ
सामुदायिक सेवा शुल्क
भूमि विभागलाई विविध प्रशासक शुल्कहरू
दुबई, युएईमा सम्पत्ति खरीद गर्नु अघि एक वकिलसँग भेट्नुहोस् निश्चित गर्नुहोस् जब विवाद वा मुद्दा चलिरहेको छ भने सम्झौताहरूले तपाईंलाई पूर्ण रूपमा समेट्छ। हामीलाई कल गर्नुहोस् +97150 6531334
युएईमा सम्पत्ति खरीद गर्ने प्रवासीहरू
विदेशीहरू (जो युएईमा बस्ने छैनन्) र प्रवासी निवासीहरूले कुनै प्रतिबन्ध बिना सम्पत्तिमा फ्रीहोल्ड स्वामित्व अधिकार प्राप्त गर्न सक्दछन्